पुरुषको सेक्स सम्बन्धी दश गोप्य कुरा यस्ता छन् ! – Everest Dainik
पुरुषको सेक्स सम्बन्धी दश गोप्य कुरा यस्ता छन् !
अाधुनिक समय सँगसँगै सेक्स भन्ने कुरा सामान्य विषय नै बनिसकेको छ । हरेक सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि सेक्सका जानकारीहरु दैनिकजसो अाइरहेको पाइएको छ । त्यसैले पनि सेक्सको विषय निकै चासोको रुपमा लिन थालिसकेका छन् । त्यसैले सेक्ससँग सम्बन्धित विषयहरुमा हाम्रो बढी रुची हुन्छ । तर यति धेरै रुचीको विषय हुँदाहुँदै पनि हामीलाई यौन सम्बन्धि विभिन्न मानवीय गुण तथा व्यवहार र तथ्यको बारेमा जानकारी नहुन सक्छ ।
हामीले यहाँ पुरुषका सेक्स सम्बन्धी दश रोचक तथ्य प्रस्तुत गरेका छौँ-
१. सम्भोगका बेला विर्यमा रहेका लाखौँ शुक्रकिट महिलाको यौनांग हुँदै पाठेघर सम्म पुग्छन् । विर्यमा लाखौँ शुक्रकिट हुने भएपनि केवल एउटा शुक्रकिटले मात्र डिम्ब सँग मिल्ने मौका पाउँछ । डिम्ब र शुक्रकिटको मिलनपछि गर्भाधारण हुन्छ र भ्रुणको विकाश हुन थाल्छ । पाठेघरमा पुगेका अरु शुक्रकिट सोही डिम्बको वरीपरी जम्मा हुन्छन् । डिम्बको वरीपरी शुक्रकिटको थुप्रो देखिनुको अर्थ के हुन्छ भने त्यहाँ भित्र शुक्रकिट र डिम्बबीच मिलन भएको छ अर्थात् गर्भाधारण भैसकेको छ ।
२. अक्जिटोसिन हर्मोनले सम्भोगका बेला महिलालाई मात्र प्रभावित गर्ने मान्यता यसअघि थियो । तर पछिल्लो अध्ययनले के देखाएको छ भने यो हर्मोनले महिला र पुरुष दुबैमा यौनिक सक्रियता बढाउँछ र पुरुषमा सम्भोगका बेला आत्मविश्वास वृद्धि गर्छ ।
सम्बन्धित् समाचार महिनावारी हुँदा कसरी यौन सम्पर्क गर्ने ? प्रत्येक पुरुषले ख्याल गर्नु पर्ने १० प्रयोगहरु
३. टेस्टेस्टेरोन पुरुषको सेक्स हर्मोन हो । तर यदि पुरुषको सरीरमा उच्च मात्रामा यो हर्मोनको उत्पादन भयो भने त्यसको असर नकारात्मक हुन्छ । सरीरमा उच्च टेस्टेस्टेरोन उत्पादन भएमा पुरुषमा सेक्सको इच्छा कम हुन्छ, उसले विवाहबाट आफ्नो अपमान भएको सम्भिmन्छ जसका कारण उसको वैवाहिक र यौन जिवन बिथोलिन्छ ।
८. महिला भन्दा पुरुष मान्छे छिटो प्रेममा फस्छन् ।
सम्बन्धित् समाचार संभोग अघि महिलाले यी कुराहरु गर्छन, रोचक तथ्य थाहा पाए छक्क पर्नुहुन्छ तपाई !